Amino asidra humine Granular
Zezika organika Lemandou Amino Acid Series dia novokarina tamin'ny fampiasana teknolojia patanty nasionaly. Ny zezika dia mifanaraka tsara amin'ny tany sy ny zava-maniry ankehitriny. Tsy ny singa ihany no ao anatiny, toy ny N, P, K, Ca, Mg, Zn, fa koa ny akora biolojika, asidra amine ary asidra humika. Izy io dia samy manana ny acti haingana ...
Zezika manezioma manezioma
Ny vokatra zezika manezioma oksizenina dia ampiasaina indrindra amin'ny fanatsarana ny tany sy hampiroborobo ny fitomboan'ny vokatra. Ny vokatry ny manezioma amin'ny vokatra dia mitovy amin'ny vitamina amin'ny vatan'olombelona. Ny magnesium no singa lehibe amin'ny firafitry ny kôlôlôphôla zavamaniry, izay afaka mampiroborobo ny photosynt ...
Fampiharana siantifika amin'ny zezika mety levona amin'ny rano
Ny fampiharana zezika azo vahana amin'ny rano miaraka amin'ny teknolojia rano sy zezika mitambatra dia nitondra fahafaha-manao betsaka amin'ny famokarana fambolena, fa ny fampiasana ratsy kosa dia hitondra loza koa, noho izany ilaina ny mifehy hentitra ny ora sy ny volan'ny zezika. Fomba fampiasana fatiliana mety levona amin'ny rano ...
Diethyl aminoethyl hexanoate (DA-6) dia mpandrindra fitomboan'ny zavamaniry marobe miaraka amin'ny asan'ny auxin, gibberellin ary cytokinin. Izy io dia mety levona anaty rano sy solvent solika toy ny étanol, ketone, chloroform, sns. Milamina amin'ny fitehirizana ny mari-pana amin'ny efi-trano, miorina ambany tsy mitongilana ary ...
Ny fomba fampiharana humate potasioma
Ny potasioma humate dia zezika potasioma biolojika avo lenta, satria ny asidra humika ao aminy dia mpandraharaha miasa biolojika, izay afaka mampitombo ny atin'ny potasioma misy ao amin'ny tany, mampihena ny fatiantoka sy ny fametahana potasioma, mampitombo ny fitrohana ary ny fampiasana potasioma nataon'i cr ...
Mitsitsia ravina mavo efa zezika EDDHA Fe 6% Iron Micronutrient Fertilizer
Ny vy voadinika EDDHA dia karazana vy voadio mahery vaika, avo lenta ary mahery vaika. Izy io dia ampiasaina ho zezika singa amin'ny làlan'ny fambolena. Ity vokatra ity dia manana bioavailability avo be. Izy io izao no fanafody manerantany ho an'ny tsy fahampiana vy sy ny fandokoana ny loko. Ny profesora mahomby indrindra ...
Ny Triple superphosphate (TSP) dia iray amin'ireo zezika P mpandinika avo indrindra izay nanjary be mpampiasa tamin'ny taonjato faha-20. Raha ara-teknika dia fantatra amin'ny anarana hoe calcium dihydrogen phosphate ary monocalcium phosphate, [Ca (H2PO4) 2 .H2O]. Loharano P tena tsara izy io, saingy nihena ny fampiasana azy noho ny P fe hafa ...
Fa maninona no malaza be ny abamectin？
Fa maninona no malaza be ny abamectin？ Abamectin dia misy poizina moka amin'ny bibikely sy bibikely nefa tsy mahafaty atody. Rehefa avy nifandray tamin'ny abamectin ny soritr'aretin'ny olitra dia tsy afaka mihetsika ary tsy manome sakafo, ary maty 2 ~ 4 andro taty aoriana. Mamono miadana i Abamectin satria tsy miteraka tsy fahampian-drano haingana amin'ny ...
Anjara asa lehibe sy ny fampiharana ny zezika manezioma amin'ny crops
Voalohany indrindra, ny anjara toerana lehibe ananan'ny zezika maneziôma Magnesium dia misy indrindra amin'ny chlorophyll, pétin ary pectin, ary mitana andraikitra lehibe amin'ny fotosintesis. Ny magnesium ion dia mpikatroka anzima isan-karazany, izay mampiroborobo ny fiovan'ny siramamy sy ny metabolisma ao amin'ny vatana, ary mampiroborobo ny fifangaroan'ny ...
Fotoam-piterahana Rehefa manondraka sy manisy zezika, ny mari-pana amin'ny rano dia tokony ho akaiky araka izay azo atao amin'ny mari-pana sy ny mari-pana amin'ny tany, ary aza tondraka ny rano. Manondraka ny trano fandraisam-bahiny amin'ny ririnina, manandrana manondraka amin'ny maraina; amin'ny fahavaratra, manandrama manondraka amin'ny ...
Ny bibikely dia afaka mifehy ny hakitroky ny olona na mampihena na manafoana bibikely manimba. Araka ny fomba fiasa dia azo zaraina ho: poizina vavony, famono otrikaretina, fumigant, maso misotro anatiny, bibikely manokana, famonoana bibikely feno sns. Vavony ...
Ny famahanam-bary dia olana goavana amin'ny fizotry ny fambolena sy ny fitantanana. Satria mora tohin'ny toetr'andro tafahoatra ny vary, toy ny rivotra mahery sy ny rotsakorana amin'ny fotoam-pivoarana any aoriana, raha vantany vao mipetraka izy dia hisy fiantraikany amin'ny famokarana izany. Noho izany, eo am-panaovana planti vary ...
Jan-19-2021 Amino asidra humine Granular
Jan-15-2021 Zezika manezioma manezioma
Jan-11-2021 Fampiharana siantifika amin'ny zezika mety levona amin'ny rano
Desambra-29-2020 Mianara bebe kokoa momba ny DA-6